घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ? शुभ कि अशुभ…?थाहा पाउनुहोस - Kohalpur Trends
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ? शुभ कि अशुभ…?थाहा पाउनुहोस
धेरैलाई कन्ठस्थ होला यो कथा– म आज फेरि पनि त्यही कथा सम्झँदैछु।एउटा घरको भान्साको पछिल्लो ढोका खुल्लै रहेछ। त्यसकै बाहिरपट्टि ससाना कीराको सिकार गर्दै एउटा भ्यागुतो विचरण गरिरहेको थियो।आफ्नो सिकारमा केन्द्रित ऊ कहिले चाल मारेर बिस्तारै घिस्रे झैँ गर्थ्यो, कहिले भने मज्जैले उफ्रिन्थ्यो। एउटा कीरालाई पछ्याउँदै जाँदा ऊ भान्साभित्र छिर्योै र कताकताबाट एउटा बडेमानको कराइभित्र खस्यो।
कराइमा आधाभन्दा बढी पानी थियो। गर्मीको बेला, चिसो पानीमा तैरिँदा उसलाई गजब आराम र सुखको अनुभूति भयो। वरिपरिको खतरासँग बेखबर भ्यागुतो आफ्नै सुरमा आराम गरिरहेको थियो। त्यहीबेला घरमालिक भान्सामा पस्यो।पानी तताउँछु भनेर हेर्दा त कराइमा भ्यागुता पो देख्छ! एकछिन त के गरुँ के गरुँ भयो उसलाई। तर, जिज्ञासु स्वभावको भएकाले उसले चुपचाप भ्यागुताको गतिविधि हेरिरह्यो। भर्खरै अघाउँजी कीराहरूको सिकार गरिसकेको भ्यागुता भने धेरै नचली चिसो पानीमा रमाएर आरामका साथ बसिरह्यो।
भ्यागुतोले के गर्दो रहेछ भनेर हेरिरहेको मानिसको धैर्य जब कम हुँदै गयो, उसलाई एउटा कौतुहलले कुत्कुत्याउन थाल्यो। कराइको पानीलाई बिस्तारै तताउन थाल्यो भने भ्यागुतो के गर्दो होला भनेर! अनि अत्यन्त सानो आँचमा बिस्तारै त्यो कराइ तताउन थाल्यो।पानी यति बिस्तारै तात्यो, कि त्यो तापलाई भ्यागुतोले अनुभूत नै गर्न सकेन। बिस्तारै तातिरहेको पानीको तापलाई उसले सहजै स्वीकार गर्योय। आनन्दै मानेर बसिरह्यो। उफ्रिनुपर्ने, कराइबाट निस्कनुपर्ने उसले कुनै आवश्यकता नै देखेन। घन्टौँ लगाएर पानी बिस्तारैबिस्तारै तात्दै गयो, बेखबर भ्यागुताको शरीर पनि बिस्तारै पाक्दै गयो। अनि…!!! आखिरमा भ्यागुतो मर्यो्।
The put up घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ? शुभ कि अशुभ…?थाहा पाउनुहोस appeared first on The Buddha Khabar.
Previous Previous post: प्रचण्डको प्रतिवेदन : ‘ओली प्रवृत्ति’ को व्याख्या (पूर्णपाठसहित)
Next Next post: भनिन्छ २२३ वर्ष अघि यी देवीको आराधना गर्दा काठमाडौंमा म’हामा’रीको अ’न्त्य भएको थियो